Soomaaliya oo sannadka cusub lasoo wareegeyso maamulka hawada - BBC News Somali
Soomaaliya oo sannadka cusub lasoo wareegeyso maamulka hawada
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo in muddo ah ku howlaneyd sidii Soomaaliya ay ula soo wareegi laheyd maamulka hawada ayaa sheegtay inay dib u dhis ku sameysa qalabkii lagu hagi lahaa hawadda Soomaaliya oo in muddo ah ka maqnaa gacanta dowladda.
Sida ay kusoo warrantay wakaaladda wararka ee SONNA, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawadda ee dowladda Federaalka Mudane Maxamed C/llaahi Cumaar oo ku sugan dalka Canada ayaa sheegay in muddo labo todobaad gudohooda kadib ay si rasmi ah u maamuli doonaan Hawadda Soomaaliya.
Wasiir Cabdullahi waxaa kale oo uu xusay in faa'ido ay u tahay Soomaaliya, maadaama buu yiri dhaqaalaha ka soo xarooda hawada Soomaaliya uu ku bixi jiray dalal kale, hataan na dhaqaalahaasi uu dib ugu soo laabanayo Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sidookale sheegay in hay'addo kale ay ku lugyeelan doonaan maamulka hawada ilaa iyo inta laga tabababarayo shaqaale Soomaaliyeed oo awood u leh inay maamulaan hawadda Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu wasiirka intaa ku daray in ahmiyadda ugu weyn ay tahay sidii Soomaaliya ay markale gacanta ugu dhigi laheyd maamulka hawada.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa hawada dalka maamulayay hay'addo ajnabi ah, kuwaa oo hawada Soomaaliya ka maamulayay meelo ka baxsan dalka.